झोलाले थिच्छ विद्यार्थी – MediaNP
काठमाडौं – के तपाईका बालबच्चा विद्याय.लय जान्छन् ? जान्छन् भने तपाईले कहिल्यै उनीहरुको झोलाको तौल ख्याल गर्नुभएको छ ? अधिकांश अभिभावक विद्यार्थीलाई उनीहरुको पाठ्यसामाग्री राख्ने झोलाका कारण हुने शारीरिक र मानसिक समस्याबारे जानकार छैनन् ।
नेपालमा २०६९ फागुन ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू गरिएकाे निर्देशिकामा १ देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि ४ किलाेसम्मकाे ताैललाई मान्यता दिइएकाे थियाे । विकसिक देशमा विद्यार्थीले बाेक्ने झाेलाकाे ताैलकाे बारेमा उल्लेख छ । अधिकांश देशमा विद्यार्गीले बाेक्ने झाेलाकाे ताैल उनीहरूकाे कुल ताैलकाे १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने कुरा उल्लेख छ । हङकङमा विद्यार्थीले बाेक्ने झाेलाकाे ताैल उनीहरूकाे ताैलकाे १० प्रतिशत वा अधिकतम ३ किलाेसम्म हुनु पर्ने ताेकिएकाे छ । यो समाचार सरोजकुमार चौधरीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
बार्सिलोनामा हलचलः ११ खेलाडी बेच्ने तयारी, को–को परे ?
अन्ततः बार्सिलोना छोड्दै काउटिन्हो